इन्द्रेणीका छत्र शाही र कृष्णा बजगाई बिचको गोप्य कुरा थाहा पाएपछि काजलले यस्तो निर्णय गरिन, बिहे हुन के गर्ला ? – Gazabkonews
इन्द्रेणीका छत्र शाही र कृष्णा बजगाई बिचको गोप्य कुरा थाहा पाएपछि काजलले यस्तो निर्णय गरिन, बिहे हुन के गर्ला ?
काठामडौँ । पछिल्लो समय चर्चाको शिखरमा छ लोक दोहोरी कार्यक्रम इन्द्रेणी । इन्द्रेणीको खास विशेषता भनेको लोक कलाकारहरुसँ लाइभ दोहोरी गराउने हो । इन्द्रेणीसँग जोडीका कलाकारहरु छत्र शाही, टिका सानु, कल्पना दाहाल, कृषा चौलागाई बाहेक अन्य कलाकारहरुसँग पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर रमाइलो दोहोरी हुने गरेको छ । यसैबिच पछिल्ला दिनमा छत्र शाहीसँ इन्द्रेणीमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उनको प्रेममा परेकी भनिएकी गायिका काजोलसँग कुरा चलिरहेका बेला छत्रले कृषासँग यस्तो रमाइलो कुराकानी गरेका छन् । हेर्नुहोस् यो रमाइलो भडियो
यो पनि पढ्नुहोस् : गाउँमा नै करोडौँको बिल्डिगं बनाएका पशुपतिको घरमा पुग्दा देखियो यस्तो रमाइलो माहोल